Dhalo Dhalo, Jar Jar, Dhalo Dhalo - Troy
Daacadnimada iyo masuuliyadda ayaa saldhig u ah helitaanka kalsoonida macaamiisha
Dhalada Daawada Farmashiyaha
DHALO KA BADAN! ka dhig baakadaha mid fudud!
Xuzhou Troy Import iyo Dhoofinta Co., Ltd.
Waxaan bixinaa daryeel shaqsiyadeed, isqurxin, barafuun, cunno iyo cabitaan, baakadaha daawada labadaba macaamiisha heerka sare leh. Waxaan soo saareynaa dhalooyin kala duwan midabkuna wuxuu noqon karaa dhagax madow & mid cad, cagaar & cagaar madow, cagaar iyo buluug. Adeegyada dheeraadka ah sidoo kale waa la heli karaa, sida gogosha, daabacaadda xariirta iyo sidoo kale daabacaadda dhaxan.
Waan helnay, qaabaynay, kahelaynaa, ka yeelnay, u rarnay, kaydiney, iyo inbadan ...
Nadiifinta Quruxda & Nolosha
Qufulka & Cadeynta Cadeynta
15-kii sano ee la soo dhaafay waxay ku kortay malaayiin milyan ...
Weydiimaha ku saabsan alaabtayada, fadlan noo dhaaf e-maylkaaga waxaanan la xiriiri doonnaa 24 saacadood gudahood.